Qindaa'inoota dimshaashaa LibreOffice dhaaf ifteessa.
Amala gargaarsa ijaaramee ifteessa.
Yeroo qaree saajoo,ajaja baafataa yookiin to'annoo irra keessu barruu gargaarsaa agarsiisa.
Maxxansi haalata "galmee fooyya'e" godha
Akka maxxansi galmee akka fooyya'iinsaatti lakkaa'amu ifteessa. Yeroo dirqaalli kun mallattaa'e, yeroo itti aanu yoo galmeen cufamu akka fooyyeen olkaa'amu gaafatamta. Guyyaan maxxansaa achumaanis amaloota galmee keessa akka jijjiiramaatti galfama.
Daangaa guyyaa kan sirni keessaa bara dijiitii lamaa baru qindeessa.